Wafti Somaliland kasoo kicitimay oo ka qaybgalay carwo caalami ah oo lagu qabtay wadanka Finland + SAWIRO. |
Wafti Somaliland kasoo kicitimay oo ka qaybgalay carwo caalami ah oo lagu qabtay wadanka Finland + SAWIRO.
Waftigii Somaliland kasoo kicitimay oo uu hogaaminayo maayar ku xigeenka gobolka Togdheer oo carwo caalami ah oo lagu qabanayo wadanka Finland kasoo qaybgalay
Waxa magaalada Turku ee wadanka Finland ka bilaamatay maanta oo ay taarikhdu tahay 5.5.2015 carwo caalami ah oo soconaysa ilaa mudo 3 maalmood ah.
Haddaba carwadan caalamiga ah oo lagu casuumay ilaa 52 wadan oo ay ku jirto jamhuuriyada S/land ayaa waxa uga qayb gelaaya wafti uu hogaaminaayo maayar ku xigeenka gobolka Togdheer mudanne Muxumad Xasan Jaamac (xoday) iyo maareyaha wakaaladda biyaha ee gobolka Togdheer mudanne Ibrahin Xasan.
Waxa waftiga soo casuumay maayarka magaalada Turku Seppo Lehtinen iyo Xildhibaan Roda C/laahi Xasan oo ah muwaadinad u dhalatay S/land.
Waxa si balaadhan waftiga loogu soo dhaweeyay carwada halkaas oo gudoomiyaha gudidda carwada mr Jarmo Linkosaari uu ku qaabilay waftiga soo dhawayn farxad leh sidoo kale waxa masuulkan ku weheliyay soo dhaweynta waftiga S/land madax gudoonka waxbarashadda ee magaalada Turku qayb xidhiidhka wadamada dibadda marwo Hannu Imanen.
Gelinkii danbe ee maanta ayaa waxa xalfad balaadhan loogu sameeyay dhamaan wadamaddii kasoo qayb galay carwadda guriga magaaladda looga taliyo, halkaas oo maayarka magaaladda mudanne Seppo Lehtinen uu si diiran oo farxad leh ugu soo dhaweeyay waftiga S/land una balan qaaday inay S/land ku marti qaadi doonan sanadka danbe sidii ay ugu soo bandhigaan alaabahooga carwaddan (insha allah).
waxa uu kulankii waftiga uu kusoo dhamaaday maanta guul iyo kulamo qiimo badan oo ay la yeesheen masuuliyiin badan oo ay kula kulmeen carwadda iyo xalfaddii soo dhaweynta ee galabta.
Eng. Jamaal C/laahi Xassan